Fitsarana manokana ara-toekarena, vola, hetra : « Mety hiteraka krizy ny volavolan-dalàna », hoy ny Rohy (NewsMada) | AEMW
Fitsarana manokana ara-toekarena, vola, hetra : « Mety hiteraka krizy ny volavolan-dalàna », hoy ny Rohy (NewsMada)
Mbola olana amin’ny fandanian-dalàna koa ny momba ny fitsarana manokana hisahana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra. Tsipahin’ny hetsika Rohy…
« Tsy mankato io volavolan-dalàna io izahay, fa mety hiteraka krizy. Amin’izao tsy fahasalaman’ny fitsarana izao, omena fitsarana manokana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra. Tsy mety io. » Fanehon-kevitry ny avy amin’ny firaisamonina sivily hetsika Rohy, Ramarosaona Faraniaina, teny Ambatonakanga, omaly, io.
« Raha mbola misy fijerena an’io volavolan-dalàna io, mbola hijoro izahay firaisamonina sivily hetsika Rohy miaraka amin’ny Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) », hoy izy. Satria misy fiantraikany be dia be amin’ny ady amin’ny kolikoly, izay tsy tokony hitanila.
Miara-miady amin’ny kolikoly ny Rohy sy ny TI-IM
Miara-miasa ny hetsika Rohy sy ny TI-IM amin’ny fanatsarana ny sampandraharaham-panjakana amin’ny sehatra fito amin’izao fotoana izao: ny famoahana pasipaoro, ny fandoavan-ketra, ny fadintseranana any Toamasina, ny asan’ny mpitandro filaminana amin’ny lalam-pirenena, ny fanomezana fahazoan-dalana mitondra fiara, ny fanaraha-maso teknika ny fiara, ny raharaha eny anivon’ny kaominina: Antananarivo I sy IV, ohatra.
Nanomboka tamin’ny volana marsa 2016 ny fiaraha-miasan’ny Bianco sy ny TI-IM ary ny firaisamonina sivily. Vita sonia teny Ambatonakanga, omaly, ny fifanekem-piaraha-miasa eo amin’ny hetsika Rohy ny TI-IM, eo amin’ny sehatry ny raharaham-panjakana, ohatra. Eo koa ny fitsipahana ny volavolan-dalàna hananganana fitsarana ara-toekarena, vola, hetra.
Mila mitohy ny asa sy ny fanaraha-maso
Misy hiverenana ny asan’ny Bianco amin’ny RRI, na ny asa ao anatin’ny zato andro, itakiana vokatra haingana, izay iverenana. Tsapan’ny hetsika Rohy, fa raha vao vita ny RRI: miverina toy ny teo aloha ny kolikoly. Koa hatao izay hampaharitra ny asa: hohalavaina ny fotoana fanaraha-maso, hitarina ny asa: any amin’ny seranan’i Mahajanga sy Toliara, ohatra. Eo koa ny fanavaozana ny lalàna momba ny ady amin’ny kolikoly, ohatra, ny fitsarana iadiana amin’ny kolikoly (Pac) izay solon’ny « chaîne penal ».
Hanao fandaharanasa manokana eran’ny faritra ny hetsika Rohy, hanao fakan-kevitra ireo firaisamonina sivily ny amin’ny kolikoly sy ny ady amin’izany amin’ny asa mivaingana. Tokony hivadika ho fandaharanasa miaraka amin’ny paikadim-pirenena amin’ny ady amin’ny kolikoly izay fakan-kevitra izay.
@dmin August 17, 2016 NewsMada No Comments
← Synoda any Antsirabe : mety hofidina filoha lefitry ny FJKM Rajaonarimampianina (NewsMada)
Fikaroham-bahaolana : hihaona amin’ny FFKM i Chissano (NewsMada) →